ko htike's prosaic collection: U.N. Warns Second Cyclone Is Forming Near Hard-Hit Burma
U.N. Warns Second Cyclone Is Forming Near Hard-Hit Burma
နောက်ထပ် ဆိုင်ကလုန်း တစ်ခု ဗမာပြည်ထဲမှာ စတင်ဖြစ်ပေါ်နေပြီလို့ ကုလသမဂ္ဂက အခုဘဲ သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာ စတင်ပြီး ဖြစ်ပေါ်နေပြီလို့ သိရတယ်။ အဲဒီ အပူပိုင်း ဆိုင်ကလုန်းဟာ နောက်ထပ် ၂၄ နာရီအတွင်းမှာ ကြီးထွားလာနိုင်တယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီမုန်တိုင်းဟာ အင်အားအသင့်အတင့်လား၊ အင်အားပြင်မလားဆိုတာကိုတော့ ကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့မရသေး ဘူးလို့ ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီပေးရေးအတွက်ရဲက ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောပါတယ်။
သူမက “ဒီသတင်းက ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ကမ္ဘာ့ မိုးလေ၀သဋ္ဌာနရဲ့ ဋ္ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ တိုင်ဖုန်းသတိပေးရေးစင်တာ (JTWC) က လာတာလို့” ပြောပါတယ်။ ပြီးတော့ ထိုထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ “ယခုအချိန်မှာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ရဲ့ အနောက်ပိုင်းကနေ မိုင် ၃၀ အကွာရေပြင်မှာ မုန်တိုင်းစတင်နေပါပြီ” လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။
BANGKOK, Thailand — A second cyclone was forming Wednesday near Burma, renamed Myanmar by the ruling military junta, less than two weeks after it was devastated byakiller storm, the U.N. said.
色情遊戲麗的色遊戲色情遊戲色情遊戲色情遊戲色情遊戲色情遊戲色情遊戲色情遊戲色情遊戲色情遊戲小高聊天室麗的色遊戲麗的色遊戲et正妹牆et正妹牆et正妹牆et正妹牆et正妹牆et正妹牆et正妹牆et正妹牆et正妹牆et正妹牆限制級電影免費a片觀看線上aa片免費看免費線上a片免費A片線上下載情人視訊聊天室情色 後宮電影院SEX情色免費AV女優-線上視訊女優天堂AV女優-無碼A片女優色情自拍線上a電影直播免費色倩短片觀賞色美媚部落格嘟嘟免費試看短片aa 片試看激凸成人論壇綜合論壇台灣情色網小老鼠米克情色網震撼情色論壇櫻桃不夜城亞洲情色風暴論壇台灣情色咆嘯論壇kk69視訊俱樂部免費漫畫帝國洪爺sex520貼片小弟弟貼影片區美美色網貼片區一葉晴貼影片Show-LIVE影音視訊成人電影下載Ａ片,免費a片網站免費色情a片天堂上班夜未眠聊天室視訊辣妹影片直播成人遊戲區情人影音視訊網火辣美眉自拍ut網愛聊天室激情網愛聊天百分百貼影片區免費影片線上直播甜心寶貝直播下載影片免費下載免費視訊聊天室入口成人圖片討論區☆♀ 限制級a片 ☆♀成人貼片影音視訊聊天室成人影音視訊波波情色貼圖美美交友情色網成人情色網天堂情色網歐美 a片aa片免費看a片百分百貼影片區百分百貼影片區百分百貼影片區百分百貼影片區百分百貼影片區百分百貼影片區百分百貼影片區百分百貼影片區百分百貼影片區免費色咪咪影片線上a片免費色咪咪影片免費色咪咪影片免費色咪咪影片免費色咪咪影片免費色咪咪影片免費色咪咪影片免費色咪咪影片免費色咪咪影片免費色咪咪影片自拍美女聊天室線上a片自拍美女聊天室自拍美女聊天室自拍美女聊天室自拍美女聊天室自拍美女聊天室